Chipiri, June 14, 2011 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Sezvaungave watoona kare, isu tine vhiki nevhiki redhiyo inoratidza iyo inorarama Chishanu chega chega pa3PM. Kushandisa BlogTalkRadio, iyo showa inozo chengetwa uye iyo podcast inosundidzirwa ku iTunes. Kunze kweiyo odhiyo yemhando, BlogTalkRadio inoramba ichidarika zvandinotarisira.
Sezvo iwe uchitsvaga kutenderera paInternet kune zano pane podcasting, kune matani eruzivo pane software senge Audacity or Bhandi regaraji kukudziridza odhiyo yako mukati, vatambi kuti vapinze mune yako saiti, zvishandiso zvekutenga, uyezve unofanirwa kupenengura kuburikidza nekunyoresa uye kurodha yega podcast pane iTunes. Iri rese ibasa rakawandisa kuchikwata chedu… saka BlogTalkRadio ndiyo nzira yakakwana.
NaBlogTalkRadio, zvese zvatinoda ndeye maikorofoni yakanaka uye Skype kubatana nevashanyi… iwe hautombodi izvo, unogona kungo daidzira nefoni yako uye wagadzirira kuenda! BlogTalkRadio iri kuburitsa switchboard nyowani, ichikubvumidza iwe nyore kubata yako show, yako vaenzi, uye yekuwedzera odhiyo kuti uuye nayo. Pamusoro pezvo, BTR inokutendera kuti ubatanidze show yako neFacebook neTwitter kuitira kuti zviratidziro zvekuratidzira zvingoerekana zvatumirwa zvichitungamira kusvika ku ratidza (chinotyisa chimiro).
Sekuratidzira kweB2B, zano redu rakatosiyana nezviratidzo zvinoenderana nevatengi:
Hatisi mushure mehuwandu hwevateereri… isu tinoda kukura vateereri vevashambadziro nevashandi vemaindasitiri.
Tiri kutsvaga vatengesi vekushambadzira neetekinoroji kuti tibatane navo pachirongwa Haisi nzira chete yekuva nemazita makuru pachiratidziro chevateereri vakawanda, zvakare zano rekuona kuti mazita edu anogara achitaurwa mudenderedzwa rimwe chete.
Tiri kutsvaga vekushambadzira vanoshanda pamakambani makuru. Mune mamwe mazwi, isu tiri kunongedza vangangove vatengi kuti vave pachiratidziro! Izvi zvingaite kunge zvakashata, asi zvinoshanda chose. Tichaenderera mberi nekuunza vatungamiriri vemusika nemakambani eFortune 500 pachiratidziro. Ivo vanozokosheswa zvese nevateereri pamwe nekutipa iwo mukana wekuti titange zvatinovaitira.
Sezvo podcasting isiri nyore, vanyori vazhinji, mabloggi, uye vatungamiriri veindasitiri vachasvetuka pamukana wekuve pachiratidziro. Iko hakuna akawanda podcast kunze uko sezvo kune mabloggi… saka mukana wekuti unzwike wakanyanya kwazvo. Zviri mukunakidzwa kwavo (uye zvako) kusvika pane iwo maratidziro.
Izvo zvakati ... isu hatidhonza mumwe munhu pachiratidziro kuomesa-kuvatengesa. Isu tinovapa vateereri kuti vazvisimudzire ivo pachavo, kambani yavo uye zano ravo pamwe nekupa mamwe mazano kana kutaurirana maererano nazvo. Kana muyenzi akaonga mhinduro yedu, panogara paine mukana wekuenderera mberi nehukama kunze kwenyika.
Isu tinoona zvinangwa zvePodcast na:
Kupa fomu yekubatana pane yedu blog. Veruzhinji vehukama nyanzvi vanobatana nesu mazuva ese nemapango - mazhinji acho mikana mikuru yekuratidzwa.
Tsvaga blogger kuburikidza blog search, PostRank uye Technorati dzinotaura pamisoro imwechete.
Tsvaga mamwe maPodcasters pazvirongwa zvakaita iTunes uye Stitcher.
Tsvaga vanyori pamabhuku achangobva kuburitswa pane misoro yatinotaura nezvayo. Vanyori vari kugara vachiedza kuburitsa izwi mumabhuku avo uye maPodcast anopa mukana wakanaka. Vazhinji vanyori vachasvetuka pamukana. Tsvaga yavo saiti uye batana navo.
Kurudzirai kuratidzwa ne kubatanidza redhiyo mu blog yako uye mapeji eruzhinji. Podcasts inopa mukana wakanaka wekuti vanhu vese vashande uye vateerere… chimwe chinhu chisingapiwe neblog. Kuteerera iri zvakare danho rakakura kubva pakuverenga… sezvo iwe uchinzwa manzwi ezwi. Inogona kubatsira vateereri vako kuvaka kuvimba newe nekukurumidza.
Jun 15, 2011 pa9: 35AM
Ida yako show, haigone kuibata nguva dzose, saka zvinonakidza kudzikisa pasi podcast, uye teerera kana ndine nguva.
Ini ndanga ndiri podcasting ndichishandisa ruoko rwakabata rekodhi uye Audacity kwekanguva, asi BlogTalk Radio iri nyore kwazvo. Ndichiri kugadzirisa chirongwa chekupedzisira ndisati ndachiisa ku itunes uye ndatanga kusanganisira chinongedzo kune mamwe mapurogiramu anozivikanwa mune edu mazano.
Tichatanga kudzidza kubva kwauri apo isu tichiedza kuvaka vateereri kuchirongwa chedu chebhizinesi diki nemusi weChitatu na10: 30.